सत्तारुढ दल निकटबाहेकका ‘गुण्डा नाइके’ लाई धमाधम जेल हाल्दै सरकार, क–कसलाई दिइयो उन्मुक्ति ? – Medianp
सत्तारुढ दल निकटबाहेकका ‘गुण्डा नाइके’ लाई धमाधम जेल हाल्दै सरकार, क–कसलाई दिइयो उन्मुक्ति ?
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २५, २०७५१२:०२0
काठमाडौं, २५ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले पार्टीनिकट बाहेकका ‘गुण्डा नाइके’ लाई जेल हाल्ने भएको छ । यसको सुरुवात काभ्रेका गणेश लामाबाट सुरु भएको छ । लामा काभ्रे कांग्रेसका जिल्ला नेता पनि हुन् ।सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा लामा दोषी ठहर भएका छन् । बिहीबार विशेष अदालतले लामालाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद, बिगोबमोजिमको एक करोड ४० लाख ५० हजार जरिवाना र त्यहीअनुसार सम्पत्ति जफत हुने फैसला सुनाएको हो ।
अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीश द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले मुद्दाको फैसला गरेको हो । लामामाथि ५ जेठ ०७० मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनीसँग २७ करोडभन्दा धेरै सम्पत्ति रहेको र केहीको आर्थिक स्रोत खुलाउन नसकेको अदालतको ठहर छ । उनलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले गौशालाबाट पेस्तोलसहित पक्राउ गरेको थियो । हाल उनी केन्द्रीय कारागारमा थुनामा छन् ।
नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । सुरुमा उनले नेकपा कार्यकर्तासमेत रहेका पर्शुराम बस्नेत, राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनांगे, चक्रे मिलनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सफाइ दिलाउन लगाएका थिए । तत्कालीन एमालेलाई चुनावमा सहयोग गर्ने, सो पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आर्थिक सहयोग र चन्दा दिने गुण्डा नाइकेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सफाइ दिनकै लागि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आफ्नो मातहत ल्याएको पुष्टि हुँदै गएको छ ।
यसका साथै अब विरोधी दल त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसका केही नेता, उद्योगपति, व्यवसायीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धामा फसाउने सरकारको तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ ।